कुन उमेरलाई 'पहिलो पटक' यौनसम्बन्ध राख्ने उचित उमेर मानिन्छ ? - Malayakhabar
होम पेज यौन र जीवन कुन उमेरलाई ‘पहिलो पटक’ यौनसम्बन्ध राख्ने उचित उमेर मानिन्छ ?
काठमाडौं । पहिलो पटक यौनसम्बन्ध राख्ने उमेर कुन हो ? यसबारे किशोरावस्थामा संसारभरिका सबैमा उत्सुकता र अन्योल छ ।
अघिल्लो लेख क्याप्टेन विजय लामालाई कोरोना संक्रमण
पछिल्लो लेख कोरोनाले अहिलेसम्म ३६० जनाको मृत्यु , संक्रमितको संख्या ५५ हजार ३२९ पुग्यो।